Kufanotaurira inotevera 5 WWE Champions - Wwe
Kufanotaurira inotevera 5 WWE Champions
Iwo WWE Championship ndiwo mubairo wakakurumbira kwazvo muvaraidzo yemitambo. Dzakawanda dzeHoro yeMazimba dzakabata zita pamusoro pemakore makumi manomwe apfuura. Chinyorwa ichi chinosanganisira ngano saRic Flair, Shawn Michaels, Bret Hart, Dombo Cold Steve Austin, Hulk Hogan, Edge, Kurt Angle, na Kane.
Nemukurumbira wayo, hazvishamise kuti mutsimba wese anoshuvira kuhwina mubairo wepamusoro. Iyo WWE Champion inowanzo kuwanikwa pamaposta emubhadharo-wega-maonero uye inowanikwa mumarquee machisi nguva dzose.
Mukwikwidzi wazvino ndiBobby Lashley, uyo ari mukutonga kwake kwekutanga. Iwo All-Mighty akakunda zita munaKurume mushure mekuita nekukurumidza basa reMiz. Tichifunga nezvehukuru hwake, zvaizotora chishamiso chidiki kumubvisa pachigaro. Zvisinei, Lashley anosungirwa kurasikirwa neWWE Championship rimwe zuva.
Hapana chaiyo nzira yekuudza kana shasha iri kuona asi ... hatizozvibvunza. #WWERaw @fightbobby @ The305MVP pic.twitter.com/fZnS2WtFau
- WWE Yenyika (@WWEUniverse) Kubvumbi 27, 2021
Imwe nyeredzi ichatora nzvimbo yayo kumusoro kana ichinge yarasikirwa, uyezve iko kutenderera kwese kuchizvidzokorora.
Zvinogona kunge zviri zvishoma kure kure kutorwa kufanotaura anotevera mashanu eWWE Champions, asi zviporofita zvakaitwa kuchengetedza mamiriro azvino uye zvirongwa mupfungwa.
# 5 Drew McIntyre achave anotevera WWE Champion
Drew McIntyre anogona kunge ari iye wekubvisa pachigaro Bobby Lashley.
Kubva musi wakakunda Lashley zita, Drew McIntyre anga ari munzwa munzira yeWWE Champion. MaScottish Psychopath angadai asina kurasikirwa nemakwikwi kuThe Miz pakutanga dai Lashley asina kumurwisa.
Vakwikwidzi vaviri vane utsinye vakavharira nyanga paWrestleMania 37. Zvisinei, MVP yakavhiringidza McIntyre, uyo akawira mukukuvara kwaLashley kweHurt Lock. Iye weScotland Warrior akagamuchira imwe pfuti kuWrestleMania Backlash, asi Braun Strowman akabatanidzwawo. Iwo Wemasimba-ese akachengetedza zita racho mushure mekupokana-kwese nekupinha Strowman.
Kofi Kingston akazviisa mumufananidzo mushure mekunge abaya WWE Champion nerumwe rubatsiro kubva kuna McIntyre. Pane mukana wekuti Kingston anogona kupokana neiyo WWE Championship kuGehena muSero, asi McIntyre ndiye anofarira kuve anotevera anokwikwidza. McIntyre naKingston vachatarisana mumutambo we # 1 wevanokwikwidza svondo rinouya.
Mushure mezvose, runyerekupe runoratidza kuti Lashley naMcIntyre vacharwa mukati meGehena muSero pane iyo titular mubhadharo-wega-maonero.
Plain uye yakapusa, @fightbobby ! #WWERaw pic.twitter.com/W8P6GeuHwn
- WWE (@WWE) Chivabvu 25, 2021
Kunyangwe Lashley anga achikurisa zvakanyanya, McIntyre akatsunga kuhwina mubairo wepamusoro. Mukati meGehena muSero, MVP yaisazove chinhu uye nekudaro, mikana yacho ingangove. Zvingave zvakaoma kubheja kunopesana neMichontyre akadzingwa basa, uye Lashley anoda kuunza zvake zvakanakisa.
Mushure mekusangana zvine hutsinye, weScotland Warrior aigona kutora zvakare WWE Championship.
gumi neshanu ZVINOTEVERA
Iyo Yekufamba Yevakafa Mwaka 11 inonyengera - Maggie achamutsiva nekuda kwekufa kwaGlenn?
'Kuchave nekudzoserwa kushoma': Mutumbi Wemurume anoratidza musi ungangodaro wedonhwe rake rinotevera rekutengesa
Shadow uye Bone: 5 zvinhu zvekutarisira mumwaka wechipiri weNetflix's Fantasy adaptation
20 Yedzakanakisa Nzira dzeKuratidza Wako Mukomana Waunomuda
'Handina Shamwari' - Zvinhu gumi zvaungaite kana iwe uchinzwa kuti ndiwe
Wepamusoro mashanu nyeredzi dzechiJuda dzinoshanda mukurwa
20 Zviratidzo Mumwe Munhu Ane Nyaya Dzakasiya (+ Sei Kukunda Izvo)
Kurwa kuri kurambidzwa
Maitiro Ekudzora Uye Kuita Nehasha Mune Hukama: 7 Hapana Matipi Matipi!
Yakasarudzika stipulation mechi yaJeff Hardy vs. Sheamus paExtreme Rules yakaziviswa
'Anofanira kugara akadzimirwa': David Dobrik neVlog Squad vari mumoto mushure mekudhonzwa nemapurisa
Rakave rini dombo Cold Cold Steve Austin wekupedzisira mutambo?
sei ndichida kuva ndega
sei vakomana vachidhonza nekudzoka
joker tinogara munzanga
zvekuita kana wabata munhu manyepo
sei ndiri chimumumu?